तपाईंको दिन शुभ होस्, हेर्नुस् आजको राशीफल – दैनिक नेपाल न्युज
आइतवार, कार्तिक ७, २०७८ | Sunday 24th October 2021
आइतवार, कार्तिक ७, २०७८
तपाईंको दिन शुभ होस्, हेर्नुस् आजको राशीफल
प्रकाशित द्वारा: शनिबार, अशोज ११, २०७६
मेषः– मनमा शान्ति मिल्ने छैन । देख्दा साना तर गर्दा जटिल बन्दै जानेछन् । लगानीका क्षेत्रबाट हात झिक्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अस्थिरता बढ्ने देखिन्छ । पारिवारिक उत्तरदायित्व वहन गर्न गाह्रो हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा अझै सुधार आउने देखिन्न । आशा र भरोसा निराशामा परिणत हुने देखिन्छ । स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ ।
वृषः– समयको सदुपयोग गर्नु होला । आर्थिक उन्नतिका सम्भावना अझै देखिन्छ । भाई बन्धु श्रीमति तथा सन्तानबाट सुख शान्ति मिल्नेछ । आफ्नै बाहुबलबाट धेरै कामको टुङ्गो लगाईनेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ । मुद्धामा जित हुनेछ । मध्यान्ह पछि समय कमजोर देखिन्छ । ऋण लगानी नगर्नु होला । काममा ढिला नगर्नु होला ।
मिथुनः–आम्दानीका मार्ग कमजोर देखिन्छ । संचित धनमा ह्रास आउन सक्छ । अरुको भर नपर्नु होला,सहयोग गर्ने भन्द खुट्टो तान्ने बढि हुनेछन् । मध्यान्ह पछि समयमा सुधार आउनेछ । कार्य लगनशिलता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । इष्टमित्रबाट भने खासै सहयोग पाईने छैन ।
कर्कटः– पूर्वाद्ध भन्दा उत्तराद्र्ध कमजोर देखिन्छ । समयको सदुपयोग गर्न पछि नपर्नु होला । लगनशिलता बढाउनु पर्ने देखिन्छ । साझेदारीमा हात नहाल्नु होला, लापर्वाहिले आफैलाई नोक्सान पु¥याउनेछ । लाभका काममा भन्दा मनोरञ्जन बढि हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । विवादित काममा हात नहाल्नु होला ।
सिंहः– प्रातकाल पश्चताप पूर्ण रहला । श्रमको मुल्य लिन सकिने छैन । सहयोग गर्दा उल्टो दोष पाईनेछ । आफन्तमा झै–झगडा पर्न सक्छ । व्यय मार्ग बढि खुल्ला देखिन्छ । आशाहरु निरासामा परिणत हुनसक्छन् । जोखिम मोलेर कुनै काम नगर्नु होला । मध्यान्ह देखि समयमा सुधार आउनेछ । रोकिएका काम अगाडि बढ्ने छन् । व्यापार बढ्नेछ ।
कन्याः– समयमा गरेका काम सम्पन्न हुनेछन् । ढिलो गरेमा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने छन् । विशेष गरेर मध्यान्ह पछिको समय प्रतिकुल देखिन्छ । नोकरी तथा राजनीतिमा आँशिक सफलता मिल्नेछ । आफन्तको सहयोगमा कमी आउनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी घट्नेछ । कमाएको धनलाई वचाउन भने गाह्रो हुनेछ ।
तुलाः– दिन अनुकुल नै देखिन्छ । विचलित नभई काम गर्नु होला अवस्य गन्तव्यमा पुग्न सक्नु हुनेछ । अरुको भर नपर्नु होला आफैले बातावरण मिलाएर काम गर्नु होला । चुनौतिका विच धेरै काम बन्ने छन् । नोकरी तथा राजनीतिमा अधिकारको खोजी हुनेछन् । ज्ञान र शिपको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला । व्यापार बढ्नेछ ।
वृश्चिकः– पूर्वाद्ध कमसल भए पनि मध्यान्ह पछिको समय अनुकुल बन्नेछ । गतिरोध हट्नेछ भने कामले विस्तारै गति लिनेछ । भाग्यले साथ दिनेछ । प्रेरणादायक काम बन्ने छन् । नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिकाको खोजी हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा विस्तारै सुधार आउने देखिन्छ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ ।
धनुः– गलत व्यक्ति सहयोगी रुप धारण गरेर आउन सक्छन् सतर्क भएर काम गर्नु होला । कुनै पनि काम गर्दा मनलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु होला । प्रतिकुल परिस्थितिको सामना गर्नु पर्नेछ । शरीरिक एवं मानसिक कमजोरी बढ्नेछ । लेनदेन कारोवारमा समस्या आउने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा अवनति हुनेछ । संचित धनमा ह्रास आउनेछ ।
मकरः– कुनै निर्णय लिनु छ भने प्रातःकालमा लिनु होला । मध्यान्ह पछि समयले कम साथ दिनेछ । जीवन साथिको सहयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट उचित मुनाफा लिन सकिने छैन । विवादित काममा हात नहाल्नु होला । हतारमा निर्णय लिएर फुर्सदमा पछुताउने अवस्था आउन सक्छ । मानसिक तनाव बढ्न सक्छ ।
कुम्भः– सफलताका सिढि चढ्न संघर्ष गर्नु पर्नेछ । सहयोग गर्ने भन्दा खुट्टो तान्ने बढि हुनेछन् । प्रतिश्पर्धाबाट टाढा नभाग्नु होला । परिश्रम पूर्वक गोपनियता अप्नाई गरेका कामबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । मध्यान्ह पछि समय थोरै सहज हुने देखिन्छ । नयाँ कामको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ ।
मिनः– समस्याबाट पूर्ण मुक्ति मिल्ने छैन । आर्थिक कारण काममा ढिला सुस्ति हुनेछ । लगानी मैत्री बातावरण देखिदैन । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । स्पष्ट कार्य दिशा तय गर्न नसक्दा उपलब्धि कम हात लाग्नेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य सुधार आउनेछ । भ्रम उत्पन्न हुनसक्छ त्यसलाई निराकरण गर्नु होला नत्र पछि अप्ठ्यारो पर्नेछ ।
दिगो समितिद्वारा सुपथ मूल्य पसलको अनुगमन
सुगर रोगबारे यस्ता छन् भ्रम र यथार्थ ! बिचार गर्नुहोस, यसरी थाहा नै नपाईकन सुगर लाग्न सक्छ
काठमाडौँ, ७ कात्तिकः काठमाडौँ महानगरपालिका–५ स्थित हाँडीगाउँ क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिने चोक्काथुनारायणको जात्रा स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर गरिएको छ । यो जात्रा गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण स्थगन गरिएको थियो । [...]
सनातन धर्मले नै मानवकल्याण गर्छः स्वामी स्वरूपानन्द
सिद्धार्थनगर, ५ कात्तिकः भारतको पञ्जाबमा आयोजित गुरु नानकको ५५० औँ जन्मोत्सवका अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित रु १०० को सिक्का र पशुपतिनाथका मूलपुजारी गणेश भट्टले प्रदान गर्नुभएको पशुपतिनाथको चन्दन लिएर [...]
यस्तो छ कालीगण्डकीको पौराणिक र सांस्कृतिक महत्व
गलेश्वर, ५ कात्तिक: कात्तिक महिना सुरु भएसँगै आध्यात्मिक र जैविक महत्वको कालीगण्डकी नदीमा स्नान गर्नेको भीड बढेको छ । कात्तिक स्नान गर्न कालीगण्डकी नदीमा भक्तजनको बिहानको समयमा भीड नै लाग्ने [...]
माता पाथिभराले हामी सबैको कल्याण गरुन, हेर्नुहोस कार्तिक ४ गतेको राशिफल
मेष Aries:- विशिष्ट व्यक्तित्वको सहयोग जुट्नाले विशेष अवसर पाइने समय छ । दिगो फाइदा हुने काम शुभारम्भ गर्ने अवसर जुट्नेछ । वृष Taurus:- आम्दानी सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्नेछ [...]
काठमाडौँ, २६ असोजः नवरात्रको सातौँ दिन दसैँ घर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गामध्येकी सातौँ कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै छ । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल सप्तमी अर्थात् दुर्गा पक्षको [...]
मेष Aries:- सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने अवसर छ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ । वृष Taurus:- बिना प्रतिस्पर्धा फाइदा [...]
कांग्रेसकी नेत्रीले बिबाह नै नगरी जन्माइन बच्चा
दिक्तेलमा भुस्याहा कुकुर आतङ्क
सुनको मूल्य प्रतितोला कति बढ्यो ?
सोमालियामा सेना र विद्रोहीबीचको भिडन्तमा २० को मृत्यु
भान्जी लिएर भाग्ने मामाको नसोचेको क’र्तुत, मा’र्छु भन्दै ध’म्की दिएर भान्जी भगाएको खु’लासा, भान्जीले बताइन (भिडियो सहित)
प्रधानमन्त्री देउवा पूर्वका बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा जानुहुँदै
चाँगुनारायण नगरक्षेत्रमा बङ्गुर पाल्न निषेध
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
महामारीको पीडाः केही व्यवसायी पलायन, केही ऋणमा डुब्दै
हिसान गण्डकीका अध्यक्षमा बराल